Fomba fanamboarana jiro solika misy volomboasary - Ikkaro
firosoana >> Fanandramana trano >> Fomba fanamboarana jiro solika amin'ny volomboasary
Ity dia zavatra nampianarin'ny namana ahy taloha ela be, miaraka amin'ny voasary sy menaka kely fotsiny azontsika atao mahazoa jiro solika ho antsika afaka minitra vitsy.
Marina fa tsy manazava antsika akory izy io, fa toa haingon-trano amin'ny alina. Raha misakafo hariva am-pitiavana ianao na raha tianao maneho fahalianana amin'ny sakafo na sakafo hariva miaraka amin'ny namana na fianakaviana.
Mba hanaovana ny jirontsika dia ireto fitaovana manaraka ireto ihany no ilaintsika. Voasary sy menaka kely, nalaiko ny sasany tamin'izy ireo ary efa namboarina. Toy izao no fanaovan-tsika simba ;-)
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manala ny hoditra amin'ny voasary manasaraka azy ho 2. Ho an'izay dia manisy marika antsy izahay ary misaraka amin'ny rantsan-tànana, ao amin'ilay horonan-tsary dia tsara kokoa izany.
Ny ampahany mahaliana antsika indrindra dia ny rambony, izay hampiasantsika wick. Tokony esorintsika tsara ity faritra ity mba tsy ho tapaka sy ho very ny menaka ao aoriana.
Amin'izany ianao dia azo atao vita ny jiro. Mila mandraraka menaka ao anatiny fotsiny isika mba hahazoana antoka fa voadoka tsara ao anaty menaka ny "wick" antsika.
Nefa ho hitanao mazava kokoa ny zava-drehetra miaraka amin'ilay horonan-tsary. Raha tsy manaraka anay ianao, famandrihana Te-hanomboka handefa horonantsary isan-kerinandro aho
Eto koa aho mamela sary vitsivitsy an'ny voasary. Nampiasaina toy ny labozia, jiro na jiro
Ahoana ny fomba fanamboarana famenon-kofehy nylon mora ...
Mamerina solosaina Linux taloha
Kodiarana tsy miankina na tsia
Tabby. Amboary ny fiara Open Source DIY anao
Fanehoan-kevitra 9 momba ny "Ahoana ny fanamboarana jiro solitany misy volomboasary"
6 Febroary 2014 amin'ny 7:53 hariva
12 Febroary 2014 amin'ny 2:45 hariva
12 martsa 2014 amin'ny 2:57 maraina
tsara izany ary voajanahary
15 martsa 2014 amin'ny 10:13 hariva
ummm, fa tangerine izay fa tsy ummm volomboasary
20 Mey 2014 amin'ny 8:09 hariva
Mahafinaritra sy ny fofon'io voasary manankarena io no tsy maintsy tsapa
1 Jolay 2014 amin'ny 6:53 hariva
Azo atao amin'ny turnip…?
3 Aogositra 2014 amin'ny 11:50 hariva
Salama, hitako izy ireo tena milay, mora aseho amin'ny tetik'asa an-tsekoly. Fa te hahafantatra aho raha afaka mampiasa karazana voankazo hafa. Misaotra
5 Aogositra 2014 amin'ny 10:49 hariva
Eny, ny zavatra tokana manandanja ny volomboasary dia ny fahafahantsika manararaotra ny rambony izay mijanona ho volo. Tsy haiko raha ankoatry ny citrus dia manana voankazo hafa miaraka amin'ireo toetra ireo ianao. Raha manandrana ny iray ianao dia mety izany dia ampahafantaro anay.
8 Aogositra 2015 amin'ny 12:50 maraina
Ny orange dia tsara fa tsy manimba ny tontolo iainana
Fanandramana ho an'ny ankizy